Gaarsiinta Diyaaradaha aan Duuliyaha lahayn Ma Dhowaan ayey Bilaabanaysaa? | Martech Zone
Gaarsiinta Diyaaradaha aan Duuliyaha lahayn Ma Dhowaan ayey Bilaabanaysaa?
Sabtida, Janaayo 26, 2019 Isniin, Janaayo 28, 2019 Douglas Karr
Tijaabinta tikniyoolajiyadaha ugu dambeeya waa qeybta xiisaha leh ee shaqadeyda. Had iyo jeer waxaan iibsadaa tiknoolajiyada si aan u tijaabiyo oo aan u hubiyo inaan la socdo. Bilo kahor, waxaan iibsaday a DJI Mavic Air, oo ku tijaabisay macaamiil kooban.
Anigu ma ihi ciyaartoy ciyaareysa ciyaarta, sidaas darteed waan qurxoon ahay ka gadaal xakamaynta. Ka dib markii aan ku tijaabiyay dhowr duulimaad, waxaan la yaabay sida aaladahaan ficil ahaan ay iskood u duulaan. Diyaaraddu way kacdaa oo way iskeed u degtaa, waxay u hoggaansami doontaa xadka saqafka, waxay duuli doontaa qaababka barnaamijka, waxayna xitaa raaci doontaa calaamadaha gacanta.
Iyadoo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay durbaba sii horumarsan yihiin, waa gaarsiinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn tafaariiqda iyo e-commerce ee soo socda? Kuma qancin inay tahay. In kasta oo keenista dukaamada iyo bakhaarrada laga yaabo inay daqiiqado u jiraan oo ay si weyn u yareyn karto kharashka maraakiibta, waxaa jira arrimo dhowr ah oo looga adkaado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, oo ay ku jiraan:
Ammaanka Drone - drones-ka waxaa laga yaabaa inay cilad farsamo ama cilado kale oo farsamo ku yimaadaan duulimaadka. Iyada oo malaayiin iyaga ka mid ah ay duulayaan magaalo, waxaan ku qasbanaaneynaa in aan waxyeelo hantiyeed iyo, laga yaabee, xitaa dhaawacyo shaqsiyeed.
Walaacyada Asturnaanta - shaki kuma jiro in diyaarad kasta oo duuliye ah ay duubi doonto dhaqdhaqaaq kasta. Diyaar ma u nahay dhammaan howlaheena maalinlaha ah ee kor lagu duubo? Ma hubo inaan weli taas diyaar u nahay.
Xaddidaadda Duulista - Waxaan ku noolahay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee degmada, marka duulimaadyo kasta oo tagaya waxaa ku yaal saqaf. Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee duulimaadka hoose ku duulaya ayaa sameyn doona qaddar aad u buuq badan. Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drones-ka u duulaya ayaa laga yaabaa inay u baahdaan in lagu soo rogo agagaarka astaamaha, dhismayaasha, iyo aagagga duulimaad la’aanta. Waa inaan dhisnaa wadooyin waawayn oo casri ah… taas oo hoos u dhigaysa waxtarka gaarsiinta dhibic-ilaa-dhibic isla markaana yareyneysa waxtarka diyaaradaha aan duuliyaha laheyn kii ugu dambeeyay.
Mashruucyada McKinsey ee gawaarida iswada ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn keen 80% dhammaan walxaha mustaqbalka. Iyo 35% macaamiisha oo muujineysa inay ku qanacsan yihiin fikradda, way cadahay in isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay caan ku tahay.
Shaki kuma jiro in gaarsiinta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay soo socoto, laakiin waxaa jira fikir badan iyo qorsheyn u baahan in lagu aado caqabadahan. Infograafigani ka yimid 2Fuula, oo ah lamaane fulin dibada ah, ayaa baaraya faa iidooyinka iyo caqabadaha laxiriira diyaaradaha xamuulka qaada wuxuuna muujiyaa sida tikniyoolajiyadani ay si weyn u carqaladeyn karto gaarsiinta maylkii ugu dambeeyay
Tags: dronegaarsiinta diyaaradaha aan duuliyaha lahaynUavgaari-gacmeedka aan la socon
10 Teknolojiyad Casri ah oo Kobcinaysa Suuqgeynta Dijital ah
9 Qalabka Suuqgeyntu inay kaa Caawiyaan inaad si dhakhso leh u abuurto Mawduuc Blog ka fiican